Ho tonga amin’ny savorovoro: miahiahy ny lisi-pifidianana ny fiarahamonina sivily… | NewsMada
Ho tonga amin’ny savorovoro: miahiahy ny lisi-pifidianana ny fiarahamonina sivily…
Misy tsy milamina, dieny aty am-piandohana ! Maneho ny ahiahiny manoloana ny fanokafan’ny Ceni indray ny lisi-pifidianana eny anivon’ny fokontany ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika… Nohamafisin’izy ireo fa tokony ho indray mandeha isan-taona ihany ny fanovana ny lisi-pifidianana ary tokony hampahafantarina izany ireo mpiara-miombon’antoka rehetra. “Mila fanazavana sy fampahafantarana io fanapahan-kevitra noraisin’ny Ceni eny anivon’ny rantsa-mangaika io. Tokony hisy mangaraharaha izany ho an’ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika…”, hoy ny mpikambana eo anivon’ny Gen, Rakotoarison Bruno. Tsiahivina anefa fa efa nakatona tamin’ny fomba ofisialy sy manetriketrika ny lisi-pifidianana nasiam-panitsiana araka ny lalàmpifidianana ny volana avrily lasa teo. Nandritra izany fanakatonana ny lisi-pifidianana izany no nilazana fa 9 tapitrisa sy iray hetsy mahery kely ny mpifidy. Nanaitra ny rehetra indray anefa ny taratasin’ny Ceni natao ho an’ny filohan’ny vaomieram-pifidianana isan’ambaratongany, faritany sy ny distrika momba ny lisi-pifidianana. Nanambara ny avy eo anivon’ny Ceni fa fomba fiasa ho entina hanatsarana ny fanitsiana ny lisi-pifidianana farany, amin’ny voalohan’ny volana desambra 2017 ka hatramin’ny faha-31 janoary 2018, ny hetsika iarahan’ireo rantsa-mangaikan’izy ireo sy ny fokontany isaky ny roa volana izany, araka ny voalazan’ny lalàm-pifidianana.
Hiteraka savorovoro amin’ny fifidianana…
Ankoatra izany, nilaza ireo sefo fokontany fa tsy noraisina ny fanitsiana nataon’izy ireo, toy ny fampidirana anaty lisitra ireo feno 18 taona ary ny fanalana ao anaty lisitra ireo
nifindra-monina sy efa maty. Anisan’izany ny eny amin’ny fokontany Atsinanantsena
Sabotsy Namehana, ny eny Ambohidrano Andrefana… Mampanahy izany satria ahina hiteraka savorovoro rehefa ho tonga ny fifidianana, araka ny nambaran’izy ireo.
Manoloana izany, inona ny antony hamerenana indray ny fanitsiana ny lisi-pifidianana. Nisy tsy fahombiazana izany ilay efa nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy sy manetriketrika tamin’ny volana avrily iny? Azo antoka ve ilay “logiciel” nampiasaina tamin’ny fanitsiana farany teo na efa nahabe resaka ny maro aza satria tsy ilay lisitra tamin’ny avrily 2017 teo no ho entina miainga amin’ity fanomanana fanitsiana lisi-pifidianana ity, fa ilay tamin’ny avrily 2016, efa niarahan’ny rehetra niaiky fa feno tsy fahatomombanana?
Etsy andaniny, vola avy aiza ao amin’ny teti-bolan’ny Ceni ny hanaovana ity lazaina ho fanomanana fanitsiana ny lisi-pifidianana ity ? Eken’ny mpiara-miombon’antoka
amin’ny Ceni ny tokony hananany fahaleovantena tanteraka, indrindra ny vola, saingy miteraka ahiahy ho azy ireo ny fomba fiasa tsy misy mangarahara ataon’izy ireo momba ny fifidianana tahaka izao. Mazava ny voalazan’ny lalàm-pifidianana fa indray mandeha ao anatin’ny taona ihany ny fanitsiana ny lisi-pifidianana.